बेलायतमा सर्वसाधारण गम्भीर आतंकित
२०११ अगष्त १४, देश बनाउन शताब्दियौं लाग्छ, तर बिगार्न?कुनै समय सूर्य कहिल्यै नअस्ताउने साम्राज्यका रूपमा चिनिने बेलायत यतिखेर गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राजधानी लन्डनमा ठीक एक साताअघि उत्पन्न आगोको सानो फिलिंगो देख्दादेख्दै डढेलोमा परिणत भएको छ। तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको शृंखला लन्डनका मुख्य बजार र चोक छिचोल्दै देशभर फैलिन लागेको छ। नागरिकको जीवनमा खास असर परेको नदेखिए पनि सर्वसाधारण आतंकित हुन थालेका छन्। व्यवसायी असुरक्षित महसुस गर्दैछन्। आफ्नो सुरक्षा प्रणालीका लागि गौरव गर्ने ब्रिटिसहरूको विश्वासलाई मुख छोपेर सडकमा उत्रेका आक्रोशित र उन्मत्त युवाले नराम्ररी हल्लाइदिएका छन्।
छुट्टी मनाउन विदेश गएका प्रधानमन्त्री र नगर प्रमुख कार्यक्रम छोट्याएर फर्किए। सप्ताहन्तको रमाइलोमा डुबेका गृहमन्त्री र प्रशासक आँखा मिच्दै काममा दौडिए। केही दिनअघिमात्र नेतृत्वविहीन भएका प्रहरी हतारहतार लौरो खोज्दै मैदानमा उत्रे। सबैका लागि यो नयाँ चुनौती थियो। पूर्वमेयर बिबिसीसँग भनिरहेका थिए, '३१ वर्षयता यस्तो घटना देख्नुपरेको थिएन।अरू देशमा भएका हडताल, लुटपाट, आगजनी, विद्रोह र विध्वंसलाई सधैँ टेलिभिजनका पर्दामा विस्मय र कौतुहलका साथ हेरिआएका अंग्रेजहरू आफैँ यस्ता घटनाको सामना गर्न विवश भए।पुनम क्षेत्री आफ्नो बर्थडे केक काट्दाकाट्दै बिबिसी टेलिभिजनद्वारा प्रसारित दृश्य देखेर भनिरहेकी थिइन्, 'छि, के भएको होला यस्तो? नेपालमा रोकियो, तर यहाँ पनि त्यस्तै देख्नुपर्‍यो। हिजोदेखि टिभी खोल्यो कि यस्तो मात्र देखिन्छ। यस्तो देख्यो कि म पहिलेको नेपाल सम्झिन्छु।मनोज आचार्यको पनि यस्तै अनुभव छ। राति कामबाट फर्किंदा उनले निकै हन्डर पाएछन्। उनको भनाइ छ, 'यो घटनाले त मलाई इराकमा केही नेपालीको हत्या भएका बेला काठमाडौंमा भएको लुटपाटको सम्झना गरायो। ऋतिक रोशन काण्डमा पनि यस्तै भएको हो।
लन्डन महानगरको एउटा चर्चित क्षेत्र हो। एउटा दुईतले बस असामान्य किसिमले सडकमा रोकिन्छ। चालकले हतार-हतार सबैलाई तुरुन्तै ओर्लन आग्रह गर्छ। असामान्य स्थितिबारे कुनै जानकारी नपाएका यात्रु अलमलमा पर्छन्। ओर्लिन इन्कार गर्छन्। कारण सोध्छन्। त्यो त चालकलाई पनि थाहा छैन। उसलाई यति निर्देशन आएको छ, 'त्यता असुरक्षाको खतरा छ, तुरुन्तै बस खाली गराऊ र ग्यारेज जाऊ।' ओर्लिन नमान्ने यात्रुप्रति चालक कठोर हुन्छ र आदेशात्मक स्वरमा भन्छ, 'तपाईंहरूकै हितका लागि हो, तुरुन्तै ओर्लनुस्, अप्ठ्यारोका लागि माफ गर्नुहोला।सबै ओर्लन्छन्। चालकले बस बेपत्तासँग कुदाउँछ। त्यसको पछिपछि एक हुल अश्वेत युवा आँधीझैं दौडिन्छन्। देख्नेहरू सबै अज्ञात, अनिष्टको आशंकाले त्रस्त हुन्छन्। भागाभागको स्थिति बन्छ। पसलेहरू ढोका थुन्छन्। एकैछिनमा आगोको लप्का देखियो। पसलका सिसा फुटेको आवाज आयो। घार्रघुर्र मानिस दौडिए। कोही पाखा लागेर रमिता हेरिरहे।
तर, अचानक कसरी यस्तो भयो त? यी युवा किन ज्यानको माया मारेर मैदानमा ओर्लिए? किन बहुलाए? यो प्रश्नले सबैको टाउको घोचिरहेको छ। यसलाई विद्रोह नै ठान्ने धेरै छन्। लामो समयदेखि यहाँका विभिन्न कम्पनीसँग आबद्ध आर्किटेक्ट सुभाष अधिकारीको तर्क छ, 'यो बढ्दो बेरोजगारीको परिणाम हो। बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी। मन्दीका कारण सरकारले थुप्रै दरबन्दी कटौती गर्‍यो, जसले बेरोजगारीको संख्या बढ्यो। युवालाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ। भत्ताले केही काम नगरी खान पुग्छ। यसले एकातिर उनीहरूको बानी बिग्रियो भने अर्कातिर बेकामे भनी उनीहरू आत्मग्लानिबाट ग्रस्त भए। आफ्नो अस्तित्वबोध नै उनीहरूलाई भइरहेको छैन। त्यसैले सिर्जना गरेको विसंगति हो यो।
उपद्रवीहरूलाई कसैको पनि पटक्कै डर छैन। अनुहार छोपेर आउँछन्, पसल फोड्छन्, लुट्छन्, आगो लगाउँछन् अनि चिच्याउँदै भाग्छन्। प्रहरी हेरेका हेर्‍यै हुन्छन्। नागरिक र व्यवसायी रमिते बनेर पाखा लाग्छन्। कसैले कसैलाई रोक्दैन। कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। दुई दिनसम्म त प्रहरी पनि निरीहझैँ थियो। त्यत्रो ताण्डव मच्चिँदा पनि किंकर्तव्यविमूढ भएर बस्यो। मन्त्रिपरिषदबाट विशेष आदेश नआएसम्म प्रहरीले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन भनियो।आक्रमणकारीमाथि हस्तक्षेप गर्दा झुक्किएर निर्दोष व्यक्तिमाथि असर पर्‍यो भने अर्को बबाल हुन्छ। त्यसैले प्रहरी निकै संयमित भए भने लुटेरा हौसिए। प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने, तर घटनास्थलमा बल प्रयोग नगर्ने रणनीति बनायो। हुल्याहालाई खोजीखोजी मुन्ट्याउँदै लैजाने गर्छ। यतिखेर हरेक सडकमा प्रहरीका गाडी साइरन बजाउँदै लुटेरा पक्रन दौडिरहेका छन्। लुटेराको पहिचान गर्न हेलिकप्टर र कुकुरसमेत प्रयोग गरिएको छ।हिजो बेलुका म बसेकै घरअगाडि मूल सडकका पसलको सिसा फोडेर लुटपाट गरियो। सडकभरि सिसा र बियरका बोतल छरिएका थिए। चोरेका रक्सीका डब्बा फालिएका थिए। युद्धमैदानजस्तो भएको थियो। तर बिहान मर्निङ वाकमा जाँदा देखेँ, वातावरण पूर्ववत थियो- सफा, शान्त, स्निग्ध। मानौं केही भएकै छैन। तर, बेलुकासम्म वातावरण यस्तै नरहन सक्छ।